ချစ်ရအောင်: Facebook Like Button လေးထည့်နည်း
Facebook Like Button လေးထည့်နည်း
Posted by Unknown Blogger Tips Blogger Widget
ဒါလေးကတော့ cbox မှာ တောင်းဆိုထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်..
linnthant: ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ချင်လို့ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
linnthant: facebook like buttom တင်နည်းပြောပြပေးပါခင်ဗျာ
ဖေ့ဘွတ်လိုက် လေးကို ပို့စ်ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေ ထည့်ကြမယ်နော်...
1. အရင်ဆုံး Blogger Dashboard >> Design >> Edit HTML အစဉ်တိုင်းသွားပါ
2. "Expand Widget Templates" ကိုအမှန်ခြစ်ခဲ့ပါ။
3. Html မှာဘဲ (CTRL + F) အကူညီဖြင့် အောက်ကကုဒ်ကိုရှာလိုက်ပါ။
4. တွေ့တာနဲ့ အောက်က ကုဒ်တွေကို သူ့ အပေါ်မှာ ကပ်ထည့်လိုက်ပါ...
5. Save your template လုပ်လိုက်ပါ... မသေခြာပါက preview နဲ့ကြည့်ပါ။
အောင်အောင်(မကစ) ရဲ့ ဘလော့ခရီးသည်လေးအား အားပေးနေကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်.. တုန့်ပြန်မှုအနေနဲ့ fb like လေးတော့ လုပ်ပေးခဲ့ကြပါနော်.. တတ်စွမ်းသမျှ တွေ့ ရှိသမျှလေးတွေကို ပြန်လည် မျှဝေနေပါ့မယ်...။ www.aungsanmks.blogspot.com www.ledimyethar.com
Aung Myint said...
very useful for me. 10 Q ......
21 October 2012 at 19:52
အစ်ကိုရေအစ်ကိုတင်ထားတဲ့အထူးဧည့်သည်တော်များဆိုတဲ့ဟာလေးလေအဲဒါမျိုးလေကျွန်တော်လိုပ်ချင်လို့ပါဗျာ။တင်နည်းလေးပြောပြပေးပါဦးနော်။နောက်ပြီးတော့အစ်ကိုပြောတဲ့ Edit HTML ကိုကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်အစ်ကိုကူညီပါဦးနော်။
အစ်ကို့ကိုတစ်ခုလောက်မေးပါရစေခင်ဗျ။facebook like button မှာ like လုပ်ပေးလိုက်ရင် like လုပ်တဲ့သူရဲ့ timeline ထဲမှာအဲဒီဟာသွားပေါ်တာလားခင်ဗျ
သုမိုးပာန် ( George ) said...
အကိုရေ PREVIEW လုပ်ကြည့်တော့မရပါဘူး မလုပ်ဘဲနဲ့လဲ မရဘူး အကို... က သုံးခုတောင် ပါနေတယ်... အပေါ်ကနေ ကပ်ထည့်ဆိုတာ ဘယ်လို ထည့်ရမှာလဲ..ခွာထည့်ရမှာလား သူ့နားက နေ ကပ်ထည့်ရမှာလား
18 May 2013 at 01:16
minzinnaing jj said...